बाबु बितेपछि आमाले समेत छोडेकी अनुषा चिटिक्क परेर स्कूल जान थालिन् (हेर्नुहोस भिडियो) |
बाबु बितेपछि आमाले समेत छोडेकी अनुषा चिटिक्क परेर स्कूल जान थालिन् (हेर्नुहोस भिडियो)
२०७५, २४ बैशाख सोमबार ०९:२४ May 7, 2018 ताजा खबरFeatured, समाचार
काठमाडौं : गत हप्ता पिएनपिखबरको अफिसियल युटुब च्यानल मार्फत प्रस्तुत गरिएको ७ वर्षीय अनुष्का के.सी. र १३ वर्षीय अनुप के.सी.को परिवारको कथाव्यथा हेरेर एक सहयोगी मनले आफ्नो हात अगाडी बढाएका छन् । टिकाथली, ललितपुर बस्दै आएका अनुषा के.सी. र अनुप के.सी.अनाथ हुन्। सानैमा आफ्नो बुबाको साथ गुमाएका उनीहरुलाई आमाले छोडेर गएपछि बिचल्लीमा परेका थिए। भाडाको कोठामा हजुरआमाको रेखदेखमा हुर्किदै आएका यी नाबालकको भाग्य नै चम्किएको छ अहिले।
अनुषाको परिवारको कथा पिएनपिखबरले पिएनपिखबरको अफिसियल युटुब च्यानल मार्फत प्रस्तुत गरे पछि उनलाई निकै सरसहयोग प्राप्त भएको छ। अब उनी आफ्नो डाक्टर बन्ने चाहाना साकार पार्न पहिलो पाइला चाल्दै छिन्। केहि समय अघि उनीहरु याक्सन फर सोसियल चेन्जका सामाजिक अभियन्ता विनय जंग बस्नेत र समाजसेवी मुना खनालको पहलमा एक बिद्यालयमा पढ्दै आएका थिए।
तर अहिले गुणस्तरीय विद्यालयमा एक महान व्यक्ति तथा सामाजिक अभियानता सुजन श्रेष्ठको सहयोगमा पढ्दै छन् अनुषा र अनुप। अनुषा अहिले कक्षा २ मा अध्ययनरत छिन् भने र अनुप कक्षा ८ मा अध्ययनरत छन्। फोहोरी लुगामा हजुरआमासँग निन्याउरो अनुहार लगाएर टासिदै बस्ने अनुषाको भाग्य नै फेरिएको छ। उनी अभिदय पाठशालामा दुई चुल्ठी बाटेर सफा ड्रेसमा चिटिक्क परेर विद्यालय जान्छिन् अचेल। यो सुअवसर एक महान दाता सुजन श्रेष्ठ मार्फत सम्भव भएको हो।
अनुषालाई १० कक्षा सम्म छात्रवृति दिएर उनले महान कार्य गरेका छन्। अनुषालाई किताबकापी, एकजोर ड्रेस र खाजाको व्यबस्था विद्यालयले नै निशुल्क प्रदान गरेको छ। यति सम्म की उनलाई विद्यालय कै सवारी साधनले घर सम्म नै निशुल्क ल्याउने पुर्याउने पनि व्यवस्था गरेको छ। अनुषालाई मात्र होइन यी महान व्यक्तिले आफ्नो विद्यालयमा १२ जना अनुषा जस्ता बालबालिकालाई छात्रवृति दिएका छन्।
अभिदय पाठशालामा फाउन्डर सुजन श्रेष्ठ कुनै बेला आफ्नो आर्थिक अवस्था निकै कम्जोर भएकै कारण पढ्नबाट बन्चित भएका थिए। विद्यालयमा मासिक शुल्क तिर्न नसकेर उनले पढ्न पाएका थिएनन्। अहिले उनी समाजमा व्यवासायिक रुपमा सफल भएपछी आफ्नो जस्तो स्थिति अरुको नहोस भन्ने उनको महान सोचलाई मुर्त रुप दिन उनले आफ्नै बिद्यालयमा अर्थिक स्थिति कम्जोर भएका बालबालिकालाई छात्रवृति दिएर पढाउने निर्णय गरेका हुन्। आफ्नो कडा मेहेनत पश्चातको सफलता पछि उनले कुनै अहम नराखी पढ्न रहर हुने तर आर्थिक स्थिति कम्जोर हुने बालबालिकालाई पढाएर प्रसंसायोग्य र समाजमा नै उदाहरणीय काम गरेका छन्।
अभिदय पाठशालामा फाउन्डर सुजन श्रेष्ठ भन्छन्,’मैले पढ्न पाइन् धेरै दु:ख गर्नु पर्यो तर मेरो जस्तो दु:ख अरुलाई नपरोस् पढ्न रहर हुनेहरुलाई पैसाको कारण पढाई नरोकियोस भनेर आर्थिक स्थिति नाजुक भएका बालबालिकालाई मैले निशुल्क पढाउने निर्णय गरेको हुँ। ‘
आफु पढ्ने विद्यालयमा अनुषाले साथिहरु पनि टन्नै बनाईसकिन। मिलनसार स्वभाबकि अनुषाको मुहार हर्षित छ। उनी दंग र फुरुंग छिन्। उनीमा अब टुहुरो भएको आभाष छैन सायद। विशाल हृदयका सुजन श्रेष्ठले अनुषालाई पढाएर उनको डाक्टर बन्ने सपना पुरा गर्न त केहि हद सम्म मदत गरे। तर उनको घरको आर्थिक अवस्था भने अझै उस्तै छ। एक छाक खानलाउन पनि धौ धौ छ अनुषाको परिवारलाई। अनुषाको परिवारलाई अब अर्को विशाल हृदयको खाँचो छ जसले पारिवारिक स्थिति पनि सुधार्दियोस। हेर्नुहोस् भिडियो